Nayakhabar.com: आफ्नै मामाबाट सिरियामा बेचिएकी माया भन्छिन ‘मलाई नेपाल फर्काइ दिनुस’
आफ्नै मामाबाट सिरियामा बेचिएकी माया भन्छिन ‘मलाई नेपाल फर्काइ दिनुस’
कमल फुयाल सिन्धुपाल्चोक थाङलाढाप–९ की एक २३ वर्षीया माया यतिवेला सिरियामा बिचल्लीमा परेकी छन । उनलाई ७२ सालको भदौमा राम्रो काम भन्दै उनकै मामा अर्जुन लामाले म्यानपावरसंग मिलेर दुबई पठाएका हुन । दुवइमा उनलाई नराम्रो काम गर्न लगाइयो र ३ महिनासम्म कोठामा थुनेर राखियो । पैसा पनि दिइएन । अहिले उनलाई सिरिया पुराइएको छ । सिरियामा उनलाई त्यस्तै खालका काममा लगाइयो । मायाले यस्तो काम गर्दिन मलाई मेरो देश नेपाल पठाइ दिनु भन्दा त्यहाको साहुले तलाई ५ हजार डलरमा किनेको छु मेरो पैसा फिर्ता दे अनि जा भन्ने गरेको छ । मायाको साथमा एक रुपैया पैसा पनि छैन । उनी हरेक कुराबाट बन्चित छन । न त उनलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न दिइएको छ । नत उनलाई सामाजिक सञ्जाद फेसबुक नै चलाउन नै दिएको छ । तर उनले लुकेर भएपनि भाइबर भने चलाएकी छिन ।
उनलाई कसरी पुराइयो
साधरण लेखपढ भएकी मायालाई उनकै मामा भनिने अर्जुन लामाले म्यानपावरसंग मिलेर बैदेशिक रोजगारीका लागि राम्रो काम भन्दै दुबइमा पठाएका थिए । माया दुबइमा उनलाई केटा मान्छेहरुसंग बस्नु पर्ने र उनीहरुलाई मसाज गरिदिनु पर्नेकाम गर्न लगाइयो । उनले त्यो काम गर्न नमाने पछि उनलाई कोठामा बन्धक बनाएर राखियो । उनलाई कोठामा मात्र थुनिएन टवाइलेटमा समेत थुनेर यातना दिइयो । ३ महिना सम्म उनलाई यस्तै हर्कत गरियो । त्यहा एक जना नेपाली महिलाले त्यस्तो गरेको मायाले बताएकी छन । मायाका अनुसार तीन महिना सम्म दुवइमा कोठामा थुनेर राखे । पटकपटक म नेपाल जान्छु मलाई नेपाल पठाइ दिनु भनेर आग्रह गरेपनि ती महिलाले मायाको कुरा सुनिन । एक दिन मायालाई अब तँ अर्कै ठाउमा काम गर्न जानेछस भनेर भनिन अनि टिकट काटेर उनलाई सिरिया पुराइन । नेपाल पठाउने आशामा उनी कोठाबाट बाहिरिन तर उनलाई सिरियाको एउटा घरमा घरायसी कामको लागि त्यहा पुराइयो । त्यहा त अलि आराम
या ? हेर्नुस मायाको कारुनीक कहानी:
मायाको ढाडमा हानिएका कोर्रा हरुका डाम
होला भन्ने उनको मनमा थियो तर उनले सोचेजस्तो भएन । घरकै साहु भनौदाले उनीसंग यौनको प्यास मेट्न खोज्यो । मायाले नमान्दा उनलाई कोर्रा हानियो । उनलाई चिथोरियो उक्त पीडा उनले हामीसंग पोखिन ।
मायाले त्यस्तो कार्य गर्न मानिन तर पनि त्यो यौन पिपासु साहुले मायालाई लटयाउने र बेहोस हुने औषधी र चुइग्याम खुवाउने गरेको मायाले हामीसंगको कुराकनीमा बताइन । त्यहा पनि उनलाई अतिनै गरेपछि मायाले एक दिन त्यो साहुले दिएको चुइग्याम र औषधी साहुकी श्रीमतीलाई देखाइन तर उल्टै मायाले पिटाइ खानु परो । मायाको पीडा बुझने कोही भएन । उनी आफनै मामाको कारण यतिबेला नारकीय जीवन विताइ रहेकी छन ।
यसरी सिरियामा पीडित भएर बसेकी मायासंग हिमगाथा अनलाइनका पत्रकार कमल फुयाँलसंग उनका साथीहरुले भाइबरमा सम्पर्क गराए । मायाले भाइबरमा रुदै भनिन ‘मेरो आफनो भन्ने कोही छैन मेरा मामाले नै मलाई यस्तोकाम गर्न पठाए । भाइबहिनी सानै छन उनीहरुको भविष्यका लागि पैसा कमाउन विदेश आएकी तर यस्तो नर्कमा पुराए । मलाई उद्धार गर्नुस दाइ म नेपाल आउन चाहन्छु’ यस्तो भावु्क बनेर मायाले कुरा गरिन ।
यतिबेला मायालाई सिरियामा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक चलाउन पनि दिएको छैन । र कन्ट्याक गर्नका लागि मोबाइल नम्बर पनि दिइएको छैन । घरबाट उनी बाहिर निस्कन बन्देज गरिएको छ । उनी पहिले नै खोलिएको भाइबरबाट कसैल े थाहा नपाउने गरी लुकेर कुरा गर्ने गरेकी छन । यसरी कुरा गरेको थाहा पाए भने उनलाई त्यहा जे पनि हुन सक्छ ।
तर उनका ममा भने मौन छन् । पटक पटक फोन सम्पर्क गर्दा पनि उनि म्यानपावर को नाम र नम्बर लुकाइरहन्छन .। कहिले म्यानपावर सरेछ त् कहिले फिर्ता गर्छु भनेको छ । यसतै कुरा अल्झ्याई रहेका । आफुलाई राजनीत दलको कार्यकर्ता भनेर चिनाउन खोज्छन उनि । जसका कारण मंपवारले उनलाई पैसा दिएर केश अगाडी न बढाउन भनेको प्रस्ट हुन्छ । यसरि अर्जुनले कुरा लुकाएको थाहा भएपछि हामीले उनकी आमालाई सबै सल्लाह दिएर प्रोसेस अगाडि बढाउन भने पनि अर्जुनले आमाको मोवाइसमेत स्वीच गर्न लगाएका छन । मायाका मामा भनिने अर्जुनलामाले समेत दुइवटै मोवाइल अफ गरेर बसेका छन ।
यस विषयमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी रविन्द्र केसीलाई जानकारी गराइसकेको छ ।
सिन्धुपाल्चोक थाङलाढाप–९ की एक २३ वर्षीया माया यतिवेला सिरियामा बिचल्लीमा परेकी छन । उनलाई ७२ सालको भदौमा राम्रो काम भन्दै उनकै मामा अर्जुन लामाले म्यानपावरसंग मिलेर दुबई पठाएका हुन । दुवइमा उनलाई नराम्रो काम गर्न लगाइयो र ३ महिनासम्म कोठामा थुनेर राखियो । पैसा पनि दिइएन । अहिले उनलाई सिरिया पुराइएको छ । सिरियामा उनलाई त्यस्तै खालका काममा लगाइयो । मायाले यस्तो काम गर्दिन मलाई मेरो देश नेपाल पठाइ दिनु भन्दा त्यहाको साहुले तलाई ५ हजार डलरमा किनेको छु मेरो पैसा फिर्ता दे अनि जा भन्ने गरेको छ । मायाको साथमा एक रुपैया पैसा पनि छैन । उनी हरेक कुराबाट बन्चित छन । न त उनलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्न दिइएको छ । नत उनलाई सामाजिक सञ्जाद फेसबुक नै चलाउन नै दिएको छ । तर उनले लुकेर भएपनि भाइबर भने चलाएकी छिन ।
उनलाई कसरी पुराइयो सिरिया ? हेर्नुस मायाको कारुनीक कहानी:
अब के हुन्छ क्रमश… फलो अप
- See more at: http://www.himgathanews.com/3174/2016/06/28/#sthash.yaiSV3nJ.uWFFzV4O.dpuf